I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Grace
Uyemukelwa efulethini lethu elisha likanokusho e-The Residence, intuthuko entsha kanokusho yase-Gibraltar.
Itholakala eduze kwase-Main Street ungathola ukuphithizela kwe-Gibraltar yomlando ngenkathi ujabulela ukunethezeka kwefulethi elisha sha. Indawo yokuhlala inechibi lokucwila ophahleni kanye namathala amabili elangeni anokubukwa kwesibhakabhaka okungu-360° okumangalisayo kwe-Gibraltar.
Ifulethi lethu lingalala izivakashi ezi-4 ezilenza lilungele umndeni wabantu abane noma abangani abangathanda umbhede wabo.
Isitudiyo sethu esikhulu esingu-35m2 endaweni yokuhlala sihle nje. Yakhelwe ngokucatshangelwayo ukuthi ibukeke kahle futhi isebenze ngesikhathi esifanayo. Kucabange njengegumbi lehhotela elikhanyayo nelinomoya elinomoya ongafika
4 abantu. Uzothola ukunethezeka kwekhaya lakho lapha okwenza kube lula ukujabulela ukuhlala kwakho kokuziphekela. Sebenzisa ikhishi lethu eligcwele kanye nendawo yokudlela enwebekayo engalungiselelwa izivakashi ezi-4. Kungani ungapakishi kancane
Futhi uwashe izingubo zakho lapha? Ingabe ikushiyela isikhala esengeziwe kupotimende lakho ukuze uyothenga mahhala okulindelwe ku-Main Street? Uzothola umshini wokuwasha omusha sha obekwe eceleni ephasishi
ikhabethe. Indlu yethu yokugezela ewubukhazikhazi eneshawa ebanzi yenza ukulungela izinsuku zakho nobusuku kube iphupho. Jabulela ikhofi lakho lasekuseni noma i-tipple yasebusuku kuvulandi ongu-7m2 ngenkathi umhlaba udlula noma ukhuphukela endaweni ephahleni ngendawo yethu yokubhukuda yesizini futhi ubambe imisebe?
Indawo iyamangalisa- kungani ungazihloleli wena usebenzisa izixhumanisi zemephu yendawo yokuhlala (36.1426699, -5.3526502).
Sithemba ukukwamukela maduze.
Sitholakala endaweni emaphakathi, imizuzwana engama-30 ukusuka kuMain Street naseCasemates square. Indawo yinhle kakhulu, ukude nemizuzu emingaki kuma-bar, izindawo zokudlela nezitolo.
Ngingakwazi ukuxhumana nawe kukho konke ukuhlala kwakho futhi ngizohlangana nawe endaweni lapho ufika.
UGrace Ungumbungazi ovelele